Sawiro Cadeyn ah:- Masuul xil sare kahaya Somaliland oo bilaabay inuu dabaqyo kadhisto hantidii shacabka + Asalka Taariikhdiisa. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSawiro Cadeyn ah:- Masuul xil sare kahaya Somaliland oo bilaabay inuu dabaqyo kadhisto hantidii shacabka + Asalka Taariikhdiisa.
August 19, 2019 marqaan Faalloyinka, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 0
SHACABKA SOMALILAND ALLE AYUUN BAA U MAQAN
Gudoomiyaha baanka dhexe ee somaliland Cali Ibraahin Baqdaadi oo mudo ku siman sanad iyo dheeraad hayey xilka baanka ayaa durba bilaabay inuu guryo waa weyn ka dhisto magaalada Hargeysa.
Warar kale ayaa sheegaya inay jiraan lacago kale oo loogu tala galay inuu kaga hawl galo sidii uu u soo xera gelin lahaa jabhada caarre, hadaba labadan fooq ee uu dhisanayo ee waaweyn ayuu ugu tala galay hudheelo la seexdo iyo goobo ganacsi iyada oo la qarinayo inuu isagu leeyahay iyada oo amaankiisana ay ciidan ilaalinayaan.
Daacish oo sheegatay masuuliyada weerar lagu qaaday Xaflad aroos ah.
DAAWO VIDEO:Nimcaan Hilaac oo Soo Afjaray Muuqaalkii laga Baahiyey Nasteexo Indho,Hees Dhinka.